Xaaladda Ethiopia xaggee ayay hadda maraysaa?
Friday November 26, 2021 - 17:44:34 in Wararka by Wariye Tiriko
1. Xukuumadda Raysal-wasaare Dr. Abiy Axmed ayaa taageero dhaqaale u heshay dagaalka uu hadda jiida hore ku tagay, isaga oo Ruushka ka helay taageero dhaqaale iyo mid ciidan ba. Sababta ugu badan ee uu dagaalka uga joodsaday ayaa ahayd innuu dhaqaale u waayay dagaalka oo dhaqaalihii Ethiopia hoos dhac wayni ku yimid, iyadda oo uu saameeyay xannuunka Covid-19 iyo dagaalka Waqooyiga Ethiopia.
2. Xadka Ethiopia ay la leedahay Suudaan ayay xukuumadda Dr. Abiy aad u adkaysay si aanay TPLF uga helin taageero Ciidan iyo mid dhaqaale oo uu Maraykanku Suudaan u soo marinayo TPLF. Haddii Ciidanka dawladda dhaxe ee Ethiopia ee jooga xuduudka Ethiopia iyo Suudaan ay difaac adag galaan, waa u dhabar jab TPLF.
3. Amxaaradda oo dagaalka Dr. Abiy ku qaaday TPLF dabada ka riixaysay oo colaad soo jireeni kala dhaxeeyo Tigreega ayaa tirsanaysa in dagaalkii qoomiyadihii Ethiopia uga fadhiisteen, oo deegaankoodii Amxaaradda sidda magaalooyinka Dessie, Combolcha, Woldia iyo qaybo kamida Galbeedka Gobolka Shewa oo TPLF weerar ku soo qaaday.
4. Madaxwaynaha Eriteria, Isaias Afwerki ayaa isna taageero dhaqaale uga raadiyay xukuumadda Dr. Abiy wadamada uu xulufada la yahay isaga oo kulamo badan ugu safray wadamo badan. Siddoo kale Afwerki ayaa xuduudka uu la leeyahay Ethiopia - deegaanka Tigreega ciidamadii ugu badnaa keenay tan iyo intii Raysal-wasaaruhu jiida hore tagay.
Waxa qoray Zakaria Ahmed